HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Goujrati Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Malagasy Malayalam Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Wayuunaiki Wolaita Xhosa Zandé Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA | AZO ATAO VE NY MINAMANA AMIN’ANDRIAMANITRA?
“Raha misy zavatra ilainao, dia ilazao fotsiny aho.” Azo antoka fa tsy hiteny an’izany amin’ny olona tsy fantatrao, na zara raha fantatrao, ianao. Tsy hisalasala kosa ianao raha namanao be ilay olona. Mandeha ho azy amin’ny olona ny hoe manao izay angatahin’ny namany.
Hita ao amin’ny Baiboly fa ataon’i Jehovah foana izay zavatra fantany hoe hahafinaritra ny mpanompony. Hoy, ohatra, i Davida Mpanjaka, naman’Andriamanitra: “Maro ny zavatra nataonao, Jehovah Andriamanitro ô, eny, maro ny asanao mahatalanjona sy ny fikasanao momba anay. ... Maro loatra ireny ka tsy ho voatanisako.” (Salamo 40:5) Tsy vitan’izay fa mampifaly ny olona mbola tsy mahalala azy koa izy, ka ‘mahavoky ny fon’izy ireo amin’ny hanina sy ny fifaliana.’—Asan’ny Apostoly 14:17.
Faly isika manao zavatra ho an’ny olona tiantsika sy hajaintsika
Tia mampifaly olona i Jehovah, ka tokony mba hanao izay ‘hampifaliana ny fony’ koa izay te ho namany. (Ohabolana 27:11) Inona anefa no azonao atao mba hampifaliana azy? Hoy ny Baiboly: “Aza manadino hanao soa sy hizara amin’ny hafa, fa sorona toy izany no ankasitrahan’Andriamanitra.” (Hebreo 13:16) Midika ve izany hoe mila manao soa sy malala-tanana fotsiny isika, dia efa ankasitrahany?
“Raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka amin’Andriamanitra”, hoy ihany ny Baiboly. (Hebreo 11:6) Tsara homarihina fa rehefa avy “naneho finoana an’i Jehovah” i Abrahama vao “nantsoina hoe ‘naman’i Jehovah.’ ” (Jakoba 2:23) Nasongadin’i Jesosy Kristy koa fa mila ‘mino an’Andriamanitra’ isika raha te hotahiny. (Jaona 14:1) Mila manam-pinoana àry izay taomin’Andriamanitra hanatona azy. Ahoana no hanananao an’izany finoana izany? Ianaro tsy tapaka aloha ny Tenin’Andriamanitra. Hanana “fahalalana marina tsara ny sitrapony” ianao amin’izay, ka hahay an’izay tokony hataonao mba “hankasitrahany tanteraka” anao. Rehefa mahalala tsara an’i Jehovah sy manao izay asainy ataonao ianao, dia vao mainka hino azy, ary izy kosa hanatona anao.—Kolosianina 1:9, 10.
Tsy Misy Zavatra Tsara Noho Izany!
Ho akaiky an’Andriamanitra ianao raha manaraka an’ireo dingana telo ato.
Afaka Mahalala an’Andriamanitra Daholo ve ny Olona?
Jereo izay ataon’Andriamanitra mba hahafahan’ny olona tso-po rehetra mahalala azy.
Hizara Hizara Ataovy Izay Asain’Andriamanitra Ataonao
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Azo Atao ve ny Minamana Amin’Andriamanitra?
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Azo Atao ve ny Minamana Amin’Andriamanitra?
Azo Atao ve ny Minamana Amin’Andriamanitra?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Azo Atao ve ny Minamana Amin’Andriamanitra?